I-Xtensio: Dala, Phatha, futhi Wethule Isibambiso Sakho Sokudala | Martech Zone
I-Xtensio: Dala, Phatha, futhi Wethule Ukubambisana Kwakho Kokudala
ULwesibili, April 28, 2020 ULwesibili, April 28, 2020 Douglas Karr
Xtensio Isu elinophawu kanye nehabhu yezokuxhumana lapho izinhlangano zisebenzisa futhi zihlele imizamo yokumaketha kulo lonke iqembu langaphakathi, amaklayenti kanye nabalingani. Yakha futhi wabelane nganoma yisiphi isibambiso osidingayo ngesihleli. Okuhanjiswa kwakho kungaguquguquka njengoba iphrojekthi yakho iguquka. Noma ngabe uhlela ukwethulwa okukhulu komkhankaso, ukwenza lula ukuxhumana kwakho kwangaphakathi, noma ukudala imibiko nezifundo eziyizibonelo, IXtensio kulapho kusebenza khona iqembu lakho.
Dala Isibambiso Sokumaketha Esinegama Elinophawu Ngaphandle Kombumbi
With Xtensio, Ithimba lakho lingakha noma yini kusuka kubuntu bamakhasimende, amasiphakamiso, izinhlelo zokuphromotha kanye namakhasi okufika kalula kumakhi wewebhu. Bese usebenzisa futhi ngokushesha futhi kalula, uvuselele futhi wenze ngezifiso okuqukethwe kwemikhankaso ehlukile. Izinzuzo zifaka:
Yonga isikhathi ekwakhiweni - Wonke umuntu eqenjini uba ngumklami. Hudula bese uphonsa amamojula wokusebenzisana - isithombe, ividiyo, amagrafu, amashadi. Shintsha umbala, isizinda noma usayizi. Lungisa ukwakheka noma ngabe udinga kanjani.
Imikhiqizo engakhishwa kalula - Chaza umhlahlandlela wesitayela seqembu lakho ngamafonti wenkampani yakho nephalethi yombala ukukhiya ukufaka uphawu kulo lonke iqembu. Yenza ngezifiso izixhumanisi ezabiwe futhi ungeze amaphasiwedi ukuze ugcine isibambiso senhlangano yakho ngasese futhi siphephile.
Yenza lula ukusebenzisana kwethimba - Sebenzani njengeqembu kuyo yonke iminyango nabaphathi. Zonke izinguquko ziyagcinwa futhi zivunyelaniswe kuwo wonke amadivayisi. Wonke umuntu uhlale esesikhathini futhi ibhokisi lakho lokungenayo alinayo imfuhlumfuhlu.
Besidinga ukuba ne- indawo ukusebenzisana, futhi kudinga nokuthi sethule imininingwane kwabanye. Esikhathini esedlule, besisebenzise u-Asana ukusebenza ngokubambisana, nePowerPoint ukwethula kwabanye ababambiqhaza. IXtensio ingena esikhundleni sesidingo sakho sobabili ngokukhazimulayo. Singasebenza ndawonye, ​​ngaso leso sikhathi sabelane ngaphandle kokuthumela okunamathiselwe okufanele ukusindise izinhlobo ezahlukahlukene ezinamagama ahlukile - nonke niyazi ukuthi kubhola - bese nisebenzisa ithuluzi elifanayo ukwethula.
UDavid Nason, CEO / Umsunguli weHireBrain
Yethula, Yabelana, futhi ulande isibambiso sakho
Ukwenza ukusebenzisana nabenzi bezinqumo bangaphandle noma amaklayenti kube lula, iXtensio inikeza amandla oku:
Yabelana nge-weblink ebukhoma - Thumela isibambiso esibalulekile njengesixhumanisi sewebhu esenziwe ngezifiso. Faka ukuvikelwa kwephasiwedi. Akusekho ukuthumela okunamathiselwe okuningi nezinguqulo ngakho konke ukuvuselelwa kudokhumenti.
Phrezenta umbukiso wesilayidi wedijithali - Ngokuchofoza okukodwa, iphepha lakho liphenduka umbukiso wesilayidi wedijithali. Thula iphimbo elihehayo nelisebenzisanayo kusuka noma yikuphi. Isigaba ngasinye sephepha siba yisilayidi.
Landa ifayela le-PDF noma le-PNG - Akunandaba ukuthi uzama kangakanani ukuhambisa ngokuphelele kwidijithali, ezinye izibambiso zizodinga ukugcinwa njengekhophi eqinile. Thumela lonke uhlu lwakho noma izinto ngazinye njengamafayela e-PDF noma e-PNG
Ngasese Yenza Indawo Yokusebenzela ye-Ejensi Yakho Namaklayenti
Xtensio Yezebhizinisi inikeza indawo yokusebenza yangasese neyokuqanjwa yokuxhuma amaqembu akho entuthuko, umkhiqizo, ukuthengisa nokuphatha ngolwazi abaludingayo.
Enza ngendlela oyifisayo ukudiliva - Ukwenza ngezifiso isibambiso sokumaketha izethameli nezitolo ezahlukahlukene kulula. Gcina noma iyiphi ifomu njengesifanekiso sangokwezifiso seqembu lakho ukuze liphinde lisetshenziswe kaninginingi. Ungayishicilela nakwiwebhusayithi yakho ukwakha umkhiqizo wakho.
Gcina wonke umuntu aqondaniswe - Hlela amaphrojekthi akho namadokhumenti ngesiteshi - umkhankaso, umnyango, amaklayenti, imibiko, njll. Faka abahlanganyeli noma wabelane ngesixhumanisi sesiteshi ukuze wonke umuntu akwazi ukukufinyelela akudingayo, lapho akudinga khona.
Hlala usesikhathini njalo - Gcina umkhondo wokuhamba komsebenzi weqembu lakho ngezaziso ezingaphakathi nohlelo futhi ulandele ukuzibandakanya nezibalo zefoliyo. Uzokwazi ukulungisa inqubo yakho yokusebenza kahle futhi ubone amathuba amasha okukhula.
Bhalisela iXtensio yezebhizinisi
Umtapo Wezincwadi We-Xtensio
Ungaqala ngaso sonke isikhathi ngesilayidi esingenalutho noma ungasebenzisa izifanekiso nezinsizakusebenza zeXtensio ezigabeni ezahlukahlukene zokusebenzisa isu lakho lokukhula - kusuka ekutholeni ikhasimende lakho elifanele kanye nemakethe yemikhiqizo efanelekile ekudaleni iziphakamiso nezinkundla noma amasu wangaphakathi wokuzivocavoca, imibiko yokuthengisa namanye amabhizinisi isibambiso.
Ukudalulwa: Singabantu Xtensio abaxhumana.
Tags: yakha isibambiso onlineukuphathwa kwesibambisoizifanekiso zokudalaukuhamba komsebenzi kokudalaiqeqeukubuyekeza kokudala onlineumklami we-pdf onlineisethulo esiku-inthanethiumhleli wesiphakamiso onlinextensio
Uyini Umklamo Ophendulayo? (Ividiyo echazayo ne-Infographic)
I-COVID-19: Abathengi kanye nezibalo zokuthenga ze- # StayAtHome